घर युरोपियन स्टार Donny van de Beek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
अप्रिल 27, 2019
Donny van de Beek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य। ट्राफिक मार्केट र इन्स्टाग्राम को क्रेडिट
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "Mardonny"। हाम्रो डन्नी वान डे बेक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइव्याङ्किङ्ग तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु भएको घटनाको पूर्ण खाता तपाईको बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्य, जीवनशैली र उहाँका बारेमा अन्य साना तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैले आफ्नो शानदार पास र बल अवधारण क्षमताओंको बारेमा जान्दछन्। यद्यपि मात्र केही विचार डन्नी वेन डे बेकको जीवनी जो निकै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, डोनी वान डे बेक नीदरल्याण्डमा अप्रिल 18 को 1997th दिन Nijkerkerveen मा जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, जेरादेन वान डे बेक र तिनका बुबा, आन्द्रे वान डे बेकमा जन्मिएका दुई जना बच्चाहरू थिए।
डचको राष्ट्रिय जातीय राष्ट्रत्व एक मध्य-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ र नीदरल्याण्डको नज्नेरकरवेनमा दुवै आमाबाबुले उठाएको थियो जहाँ उनी आफ्नो साना भाइ रौदेन दे दे बेक सँगसँगै बढे।
डोनी वान डे बेक उनको आमाबाबु ग्रिनाइना र आरेख द्वारा उठाएको थियो। क्रेडिट: निजिर्क।
निजर्कारकेभेननमा एक घरघरमा बढ्दै जाँदा जवान डोनीले प्रारम्भिक जीवनको समयमा फुटबलको बारेमा चिन्तित थिएन। त्यसोभएको जनावरले जनावरहरूको साथमा चढ्ने रूखहरू र समय बिताएका छन।
त्यसैगरी, डोनीले आफ्नो परिवारको विमानस्थलका पक्षीहरूलाई झुण्ड्याउन रुचाउँछन्, एकपटक उनीहरूले साहसी भई पोल र जालबाट खेतको छतमा चढे।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
डनी5वर्ष भन्दा कम थियो जब उनले निजर्कारकेभेनको एक बेनिज्ज्वल विद्यालयमा पढ्न थाले। स्कूलमा जवानलाई सामान्य बच्चाको रूपमा वर्णन गरिएको थियो जसले शान्त थियो र साथीहरूको जस्तो शर्मिला गर्दैनन्।
समय डोनी चार वर्षको उमेरमा, उनको बुबा आन्द्रेले उनलाई अज्याक्सको स्टेडियममा फुटबल खेल हेर्न खोजे। डोनीले खेलमा चाँडै रूचि विकास गरे र त्यसपछि स्थानीय क्लब वेन्चेचे केटाहरू भित्र नामाकरण गरे।
डोनी वान डी बेक धेरै युवा थिए जब उनको बुबाले उनलाई फुटबल म्याच हेर्न लागे। क्रेडिट: इन्टाग्राम।
भेन्चेचे केटाहरूसँग प्रशिक्षणमा डोनीको पहिलो दिनमा सम्झँदा तिनका बुबा अरेन्डले यस्तो लेखे: "डनीले प्रशिक्षणको दौरान उत्कृष्ट राम्रोसँग फिट गर्यो र त्यस दिनबाट खेलको शीर्ष प्राथमिकता खेले".
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ र रोड प्रसिद्धि स्टोरी
यो वेन्चेचे केटा थिए कि जवान र महत्वाकांक्षी डन्नी फुटबल मा आफ्नो कौशल को सम्मान को रूप मा राम्रो तरिकाले सिकन को रूप मा राम्रो तरिकाले खेल को उनको शैली को विशेषताहरु कि कसरि बनाउन को लागी केहि वर्ष खर्च गरे।
यो लामो समय अघिको निर्धारित हुनुभन्दा न्युयोर्कको प्रदर्शनले अजक्स सहित शीर्ष-फ्लाइट क्लबहरूको ध्यानमा ध्यान पुर्यायो जसले त्यस वर्ष यिनोक्सक्समा आफ्नो ग्यारह वर्षको पुरानो अकादमीलाई भर्ना गर्यो।
डन्नी वान डे बेकले 2008 मा अक्स्याक्स अकादमीमा सामेल हुनुभयो। क्रेडिट: अजाक्सदिशानिर्देश।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
अज्याक्सको युवा प्रणालीमा हुँदा, डोनीले क्रमशः रैंक्समार्फत गुमाए र आफूलाई क्लबको सबैभन्दा प्रत्याशित खेलाडीको रूपमा स्थापित गरे, एउटा विकास जसले उनलाई एक्सएक्सक्सक्समा अक्स्याक्सको पहिलो टोलीलाई बढावा दिन सक्थ्यो।
यद्यपि डोनीले आफ्नो पहिलो सिजनमा अज्याक्सको लागि एक्सएनमक्स उपस्थितिहरू बनाए तापनि उनले सुधार गरे र वर्ष6बाट नियमित प्रदर्शनहरू रेकर्ड गर्न थाले। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डन्नी वान डे बेकले 2016 पछि अज्याक्सको लागि नियमित प्रस्तुति रेकर्ड गरिरहेको छ। क्रेडिट: Youtube।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
डनी लिखित समयमा अझै विवाह भएको छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो डेटिङ इतिहास र वर्तमान सम्बन्ध जीवनको बारे तथ्यहरू ल्याउँछौं। सुरू गर्न डनीले आफ्नो लामो समय मित्र, मरिज्न वान ईजेकलनेबर्गलाई भेट्न अघि कुनै रिश्तेमा रहेको थाहा छैन।
उनको प्रेमिका मैरीजसँग एक मायालु फोटोमा डोनी वेन बेक। क्रेडिट: Spelersvrouw।
एक समान गृहनगरबाट मायालु प्रेमिकाहरू उनीहरूको विगतको उमेरमा रोमाञ्चक रूपमा संलग्न भए र पछि एक जोडी बने। यसबाहेक, डोनीसँग कुनै छोरा (हरू) वा छोरीहरू छन्, त्यो विकासले परिवर्तन गर्न सक्छ भने उसले अर्को स्तरमा मर्जिन्जसँगको सम्बन्ध लिन्छ।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
डोनी वान डे बेक चार सदस्यहरु को एक परिवार मा जन्मिएको थियो हामी तपाईंलाई आफ्नो पारिवारिक जीवन को बारे मा तथ्य ले।
डोनी वान डे बेकको बुबाको बारेमा: अन्ड्रे वान डे बेक डोनीको बुबा हो। यद्यपि आर्य कहिल्यै कैरियर फुटबल खेलाडी थिएन, उनले एकपटक वेन्चेचे केटाकेटीको नेताको रूपमा सेवा गरे र उनी आफ्ना छोरा डन्नीलाई फुटबलमा खेल्दा श्रेय दिएका थिए जब उनी4उमेरका थिए। दुई को सहायक पिता डोनी संग राम्रो सम्बन्ध मा छ र उनको अनौपचारिक व्यक्तिगत कोच को रूप मा काम गर्दछ।
डन वैन डे बेक बचपन फोटोमा आफ्नो बुबा एण्डर्डको साथ। क्रेडिट: Veenscheboys।
डोनी भ्यान डे बेकको आमाको बारेमा: Gerdina van de Beek डन्नीको आमा हो। उनी डोनीसँग राम्रो सम्बन्ध बाँड्छन् र फुटबल प्रतिभाको 'बचपन कथा संसारको विवरण साझेदारीमा प्रसन्नता लिन्छन्। फुटबल खेलाडीहरूको धेरै आमाहरूको विपरीत, जेराना खेलको बारेमा भावुक छ र डनीले आजको खेलाडीलाई बन्न पुग्यो।
डनी भ्यान डे बेक उनको आमा जेराना संग। क्रेडिट: निजिर्क।
डोनी भ्यान डे बेकको सिकारको बारेमा: डनीको बहिनीहरू छन् तर एक सानो भाइ रोडो भनिन्छ। डोनी जस्तो, भाइले वेन्सेचे केटाहरु मा प्रशिक्षण सुरु गरे तर डोनी जस्तै एक लोकप्रिय र सनसनीखाना खेलाडी को रूप मा समाप्त नहीं भयो। यद्यपि, रोडी Donny को सबै भन्दा ठूलो प्रशंसकहरु मध्ये एक छ र उनको साथ एक पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध साझा गर्दछ।
डन्नी वान डे बेकसँग साना भाइ रौडी। क्रेडिट: इन्टाग्राम।
डोनी भ्यान डे बेकको सम्बन्धको बारेमा: डनीको तत्काल पारिवारिक सानो देखि टाढा उनको आमाबाबु दाजुभाइ र दाजुभाइ र उहाँका आमाबाबुको बारेमा जानिन्छ। त्यसैगरी, उनले आफ्नो चाचा र चाचाको बारेमा केही कुरा प्रकट गर्न छाडेको छ, एक विकास जुन बोर्डमा जान्छ उसको कुकुर, भित्ता र भित्रीहरूका लागि।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
डोनी वान डी बेकले के गर्छ? पछि हामी तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तित्वको सिर्जना ल्याउनको लागि तपाईंलाई एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गरौं। सुरु गर्न को लागि, डनीको वेला मेष राशि चक्रको मिश्रण हो। उहाँ सस्तो, ऊर्जावान हुनुहुन्छ र उहाँ चाहानुहुन्छ वास्तवमा जान्नुहुन्छ।
नजिकको रूढ़िवादी हुनुको लागी, डोनीले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विवरणहरू प्रकट गर्दछ जुन शौकहरू जकूजीमा बसिरहेका छन्, मित्रहरूसँग बाहिर फाल्ने र डार्ट्स खेल्छन्। उहाँसँग फैशन, क्यानोइङ र बक्सिङमा रुचि छ।
डोनी (दाँयाबाट पहिलो) साथीहरूको साथ फाँट गर्नको लागि एक मौका छुट्याउँदैन। क्रेडिट: इन्टाग्राम।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
यद्यपि डनी वान डिक बेक नेट लायक अब पनि समीक्षा अन्तर्गत छ, उनको लेखनको समयमा 22.50 मिलियन पाउण्डको बजार मूल्य छ। मिडफिल्डर को फुटबल भन्दा बाहिरको धनको मूल अज्ञात छ, मध्य-कक्षाको जीवनशैलीको जीवित जीवन बिताउँदछ र जस्तो देखिन्छ कि यसले उनको आय वा वेतन माथिको खर्चबाट रोक्छ।
Nijkerkerveen मा उनको घर को वास्तविक मूल्य अझै सम्म पूर्ण रूप देखि निश्चित भएको छ जबकि उनको कार संग्रह को बारे मा ज्यादा जान्दछन। त्यसो भए तापनि उसले जेट विमानमा उडान गर्न सक्छ र नियमित रूपमा किनमेलको स्पाइजमा लगाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्दैन।
डोनी भ्यान डे बेक नियमित खरिद हो र त्यस्ता गतिविधिमा उचित खर्च हुन्छ। क्रेडिट: इन्टाग्राम।
Donny van de Beek Childhood Story Plus - अनौपचारिक जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो डोनी भ्यान डे बेक लपेट गर्न यहाँ बचाइएका केही जीवित वा कम ज्ञात तथ्याङ्कहरू जुन धेरैजसो उहाँका जैवमा समावेश छन्।
डन्नीको धर्मको बारेमा सानो थाहा छ। यद्यपि, बाधाहरू उहाँका अनुयायी हुनुहुन्छ विश्वासी हुनु।
डोनी फैंसी टैटूहरू वा शरीरको कला होइन। त्यसकारण, उहाँसँग कुनै पनि लेखनको कुनै पनि छैन।
डोनी वान डी बेक ले आफ्नो बचपन दिन सम्म एक बेग्लै अनौठो छाती बनाए। क्रेडिट: इन्टाग्राम।
उसले पेय देखेको छ, एक विकास जसले आफ्नो उपेक्षाको श्रेय पाउँछ।
डन वान डे बेक बचपन स्टोरी प्लस अनौठो जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डोनी भ्यान डे बेक पढ्नको लागि धन्यबाद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
अज्याक्स फुटबल डायरी
डच फुटबल डायरी
लेस्से शोन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
Dusan Tadic बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कास्पर डोलबर्ग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यो टिप्पणी Antispam सुरक्षा अन्तर्गत छ
0 कसरी थ्रेड
0 थ्रेड जवाफहरू
प्रायजसो कसरी प्रतिक्रिया गरियो
0 कसरी लेखकहरू
नयाँ पुरानो धेरै मतदान गरियो
नयाँ अनुवर्ती टिप्पणीहरूमेरो टिप्पणीमा नयाँ जवाफहरू
vannyhenrico - फेब्रुअरी 18, 2020
फेब्रुअरी 16, 2020
vannyhenrico - फेब्रुअरी 18, 2020 0
vannyhenrico - फेब्रुअरी 16, 2020 0
अगस्ट 5, 2017
डिसेम्बर 17, 2017
अप्रिल 2, 2018